Ọtụtụ n'ime atụmatụ nke Xiaomi Mi 9 Lite nwere leaked | Gam akporosis
Ihe omuma ohuru nke Xiaomi Mi 9 Lite abiala: otutu uzo oru ya di iche
Naanị ụbọchị abụọ, nke bụ September 16, Xiaomi My 9 Lite ruo Spen. Datebọchị ahụ dịkwa na mba ndị ọzọ dị na Europe, nke bụ otu nke ha ga-anata ya nke ọma.
Ọhụrụ ọhụụ anyị na-ekwu maka ya ugbu a bụ maka dịgasị iche iche nke njirimara isi na nkọwapụta teknụzụ nke ọnụ a. Ọtụtụ data ọhụrụ bụ nkwenye, karịa ihe ọ bụla ọzọ, nke ndị ọzọ nke anyị wepụtara na izu ndị na-adịbeghị anya, a na-egosipụtaghachi ọtụtụ àgwà ndị igwe a dị n'etiti ga-anya isi.
Na ajụjụ, ihe akụkọ ọhụrụ na-egosi bụ nke ahụ na Xiaomi Mi 9 Lite ga-abịa na a Ihuenyo AMOLED nke 6,39 nke anụ ọhịa nwere mkpebi FullHD + nke 2,340 x 1,080 pikselụ. Nke a, dịka ọ na - enweghị ike ịbụ n'ụzọ ọzọ, ga - etinye obere ọkwa n'ọdịdị mmiri mmiri ma jiri obere bezels mee ihe, n'agbanyeghị na ọ ga - eme ka mkpọmkpọ pụtara nke anyị na-ahụ ọtụtụ n'ime mobiles ndị dị na ahịa ugbu a.
Usoro foto ga - abụ otu n’ime isi igwe ga - edozi nke kachasị. Isi ihe mmetụta bụ mkpebi 48pipixel nke ejikọtara na oghere 13 MP na mbara igwe na ihe omimi 2 MP. Agbakwunyere na ọkwa mmiri ahụ bụ 32 MP selfie shooter nwere oghere f / 2.0 na ọtụtụ ọrụ AI.
Batrị ikike 4,030 mAh nwere chaja ngwa ngwa 18 W bụ ihe anyị ga-ahụ n'ime igbe. N'aka nke ọzọ, Mi 9 Lite ga-agba ọsọ MIUI 10 dabere na gam akporo 9.0. Enweghi ihe mkpịsị aka aka na azụ, nke ahụ bụ n'ihi ngwaọrụ a na-eji ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na-egosipụta. Ekwentị ga-enwe NFC n'ụgbọ. Ọ dịkwa mma ịkọ na-atụ anya na ọ ga-abụ a renamed version nke a maara nke ọma Xiaomi CC9.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe omuma ohuru nke Xiaomi Mi 9 Lite abiala: otutu uzo oru ya di iche
Firefox ga-enwe nke ya VPN n'efu